Homelọ Ọrụ Homelọ Ọ Bụla Chọrọ Otu! | Martech Zone
Homelọ Ọrụ Homelọ Ọ Bụla Chọrọ Otu!
Monday, December 4, 2006 Fraịde, Ọktọba 24, 2014 Douglas Karr
Obere ihe karịrị otu afọ gara aga (2005) m na-eme ihe dị ntakịrị na ị na-agba izu na ọ dị m mkpa ịnweta ụfọdụ ngwaike ọhụrụ gburugburu ụlọ iji dozie ya. M zụrụ a na kọmputa ọhụrụ, ọhụrụ netgear wireless rawụta na wireless kaadị… na kacha mma ego bụ m LinkStation.
Njikọ LinkStation na-ejikọ na rawụta ikuku m ma nwee oghere 250Gb. The ọrụ interface maka LinkStation bụ n'ezie mfe simple M nwee ike melite a mbanye maka ọ bụla nke m ụmụaka, kọmputa m, a Central music ndekọ, na a ahịa ndabere. The LinkStation bịakwara jiri eriri USB iji kesaa onye nbipute, ngwanrọ FTP, na sọftụwia ngwanrọ mgbasa ozi. Nke ahụ na-enyere m aka itinye ebe obibi akwụkwọ m nke dịdebere kọmputa ndị ahụ na ebe dị mma.
Njirimara m kachasị amasị m bụ na ịnwe oghere buru ibu na PC m na ebe ntanetị dị. Mgbe ọ bụla m rụchara ọrụ, m na-edepụtaghachi ya n’ebe ahụ. Mgbe obula m budatara ma wụnye ngwanrọ, ana m edegharị ebe ahụ, na mgbe ọ bụla m chọrọ ịkekọrịta ihe n'etiti kọmputa - anyị na-enyefe faịlụ na òkè n'etiti ha niile. Enweghị 'nchekwa mbak', enweghị ntinye diski, enweghị nsogbu ma ọlị.
Ihe dị ka ọnwa 7 gara aga, PC m bụ onye Norton Antivirus melite kpamkpam nke kpochapụrụ mpaghara buut. Aghaghị m ịgbanwegharị ụgbọala ahụ ma bubatagharịa ihe niile site na ncha. O nwere ike buru nro zuru oke ma ewepu na m nwere ihe nile edokwasị na netwọk draịva. Azụtara m azụ n'otu ụbọchị ma ọ bụ karịa, echefughị ​​kwa m.
Otu afọ na ọkara ka e mesịrị ma ugbu a, otu n'ime ndị ahịa m gwara m ka m mee nyocha ọzọ maka ya. Ọ dị ogologo oge na ọbụnadị na etinyeghị m ngwa ndị ọzọ. Na ngwụcha izu ikpeazụ, amalitere m ịkekọrịta ma kwụgharịa ngwa ndị ahụ. Na ngwụcha izu a, ebudatara m nyocha ochie ahụ ma nwee ike ịkụtu nyocha ahụ n'ehihie a. Re-ọzụzụ m na ngwa ahụ bụ akụkụ kachasị sie ike!
Yabụ - lee ụfọdụ ndụmọdụ maka ndị ọkachamara na ndị na-amu amu n'otu n'otu na-arụ ọtụtụ ọrụ na kọmputa ha:
Tinye ego na ngwaọrụ nchekwa.
Jiri igwe nchekwa netwok. Ohere ọ bụla ị nwetara, detuo ọrụ ị na-eme ya.
Detuo sọftụwia nwụnye, mmelite, mmelite ọkwọ ụgbọ ala, yana ọnụọgụ Oghere Usoro ahụ na oke. Nke a na-etinye ihe niile n’enweghị nsogbu na ebe abụọ.
Ihe dị mma gbasara nchekwa netwọkụ bụ na enweghị nkwado ndabere na mpaghara weghachite oge dị mkpa… naanị detuo faịlụ ahụ na draịvụ ahụ, karịa ọsọ ọsọ otu a. (Enwere m nkwado ndabere na mpaghara PC m ọ bụla).
Ma ọ bụrụ na ị na-eche, Mac na-ahụ ya niile nke ọma! Ọbụna onye na-ebi akwụkwọ!
Tags: ndabereNjikọnchekwa ngwaọrụ
Ilele ihu akwukwo agaghi anwu
Iwu 10 maka Nzukọ Ndị Kwesịrị Ekwesị
Dec 4, 2006 na 9:32 PM
Mụ onwe m bụ onye na-akwado ngwa ọrụ LinkStation. Enwere m nsụgharị 160GB n'onwe m ma ọ na-agba ọsọ kemgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 2 ugbu a. Ihe kachasị mma bụ na n'ihi ngwa ọrụ ya, ọ nweghị mmezi ma ọ bụ nlekọta na nri chọrọ.
Dec 4, 2006 na 10:49 PM
Mgbe m zụrụ nke m, otu enyi m zụtara nke 1Tb. Enwere m anyaụfụ! Ọ hụrụ ya n'anya. Enwere m ọchịchọ ịmata ihe kpatara mmadụ enweghị wuru onye nbipute / harddrive / wireless router.